Biza iHodges Hawk Mascot »IYunivesithi yaseHodges
Igama leHodges Hawk Mascot!
Sifuna Uncedo lwakho!
SineHodges Hawk njengemascot yethu, kodwa Hawk yethu ifuna igama.
Olu khuphiswano luvulelekile kubo bonke abafundi beYunivesithi yaseHodges, abasebenzi, abafundi, abafundi, kunye noluntu ngokubanzi. Thumela ungeno lwakho nge-imeyile ku: Marketing@hodges.edu. Faka igama lakho kunye nelokugqibela, idilesi ye-imeyile, kunye negama elinye leHawk.
Imigaqo esemthethweni kunye noLwazi
AKUKHO UKUTHENGWA KUFUNEKELEKILE UKUNGENA OKANYE WIN. UKUTHENGWA KUNGENYUSI AMATHUBA OKUPHUMELELA.
ukufanelekaOlu khuphiswano luvuleleke kuphela kwi-Hodges University faculty, abasebenzi, abafundi kunye nealumni. Ukhuphiswano luvuleleke kuphela kubahlali bezomthetho baseMelika, kwaye akukho nto apho kungavunyelwanga ngumthetho. Ukhuphiswano luxhomekeke kuyo yonke imithetho kunye nemigaqo esebenzayo. Ukungasebenzi apho kungavumelekanga.
Isivumelwano neMigaqo: Ngokuthatha inxaxheba, uMgqatswa ("Wena") uyavuma ukubophelela ngaphandle kwemiqathango ngokupheleleyo kule Mithetho, kwaye Umele kwaye uqinisekise ukuba Uyahlangabezana neemfuno zokufaneleka. Ukongeza, uyavuma ukwamkela izigqibo zeDyunivesithi yaseHodges njengeyokugqibela kwaye iyabopha njengoko inxulumene nomxholo wolu khuphiswano.
Ixesha loKhuphiswano: Amangenelo aya kwamkelwa ukuqala ngoLwesibini, Septemba 15, 2020 ngo-7: 00 am EST kwaye uphela ngoLwesithathu, Septemba 30 ngo-11: 59 pm EST. Onke amangenelo kufuneka afunyenwe ngoLwesithathu, nge-30 kaSeptemba 2020 ngo-11: 59 pm EST nge-imeyile ku: Marketing@hodges.edu.
Ungangena njaniUngenelo kufuneka luzalisekise zonke iimfuno zokhuphiswano, njengoko kuchaziwe, ukuze ufaneleke ukuphumelela ibhaso. Izibhengezo ezingagqitywanga okanye ezingayithobeliyo imigaqo okanye imigaqo-nkqubo inokungafaneleka ngokokubona kweYunivesithi yaseHodges. Unokungena kube kanye kuphela, ubonelele ngegama ocinga ukuba iHodges University Hawk kufuneka ibenalo. Awunakungena ngaphezulu kwamaxesha kunokuba kubonisiwe ngokusebenzisa iidilesi ezininzi ze-imeyile, izazisi, okanye izixhobo kwinzame yokuthintela imigaqo. Ukuba usebenzisa iindlela zobuqhetseba okanye ngenye indlela uzama ukuthintela imigaqo, ukungeniswa kwakho kungasuswa kulungelelwaniso ngokokubona kweYunivesithi yaseHodges.
amabhaso: Ophumeleleyo kukhuphiswano uyakufumana iHodges Hawk yokudlala. Ukuba abangeneleli abaninzi bangenise igama elifanayo lokuphumelela, umntu ophumeleleyo uya kukhethwa ngokungacwangciswanga. Ibhaso alinakuguqulwa. Nayiphi na kunye nazo zonke iindleko ezinxulumene nebhaso, kubandakanya ngaphandle komda kuyo nayiphi na i-federal, urhulumente, kunye / okanye iirhafu zalapha ekhaya, iya kuba luxanduva lomntu ophumeleleyo. Akukho kutshintshwa kwebhaso okanye ukugqithiselwa / ukwabelwa ibhaso kwabanye okanye isicelo sokulingana nemali nguMphumeleleyo esivumelekileyo. Ukwamkelwa kwamabhaso kwenza imvume yokuba iYunivesithi yaseHodges isebenzise igama likaWinner, ukufana, kunye nokungena ngeenjongo zentengiso kunye norhwebo ngaphandle kwembuyekezo, ngaphandle kokuba kuvunyelwe ngumthetho. IYunivesithi yaseHodges, ngokokubona kwayo, inokuwonga ngaphezulu kwento yokudlala iHodges Hawk.
Iziphumo: Amathuba okuphumelela axhomekeke kwinani lamangenelo afanelekileyo afunyenweyo.
Ukhetho loMninimzi nesaziso: Ophumeleleyo uya kukhethwa liBhunga eliPhezulu leYunivesithi yaseHodges. Ophumeleleyo uya kwaziswa nge-imeyile kwithuba leentsuku ezimbini emva kokukhethwa koMninimzi ophumeleleyo. IYunivesithi yaseHodges ayizukubenoxanduva lokungaphumeleli kukaWinner ukufumana izaziso ngenxa yogaxekile, i-imeyile engafunekiyo okanye ezinye iisetingi zokhuseleko okanye ulungiselelo lweWinner lolwazi olungachanekanga okanye olungasebenziyo. Ukuba uMninimzi akanakuqhakamshelwana naye, akafanelekanga, usilele ukubanga ibhaso kwiintsuku ezisixhenxe zomsebenzi ukususela ngexesha lokuthunyelwa kwesaziso, okanye ukusilela ukubuyisa kwangexesha isimemezelo esenziweyo kunye nokukhululwa njengoko kufuneka, ibhaso linokuphulukana nomnye umntu Ophumeleleyo kukhethwe. Ukwamkelwa nguMphumeleleyo ngebhaso elinikezelwe kolu khuphiswano kuxhomekeke ekuthotyelweni kwayo nayiphi na imithetho kunye nemigaqo yommandla. NAKUPHI UKUQHATHALEKA LE MIGAQO YASEBURHULUMENTENI (KWI-HODGES UNIVERSITY'S DISCRETION) KUYA KUKHO ISIPHUMO SOKUPHATHA KWE-WINNER NJENGOMNQOBI WOKHUPHISWANO, KUNYE NONKE AMALUNGELO NJENGOMNQOBI AYA KUQHUBEKA NGOKUPHELELEYO.
Amalungelo Onikwe Nguwe: Ngokungenela olu khuphiswano, Umele kwaye uqinisekisa ukuba ungeno lwakho ngumsebenzi wokuqala wobunini, kwaye awophuli naliphi na ilungelo lomntu wepropathi okanye ipropathi enomgangatho ophezulu wokuqonda. Ukuba ungeno lwakho lwaphula umthetho welungelo lomenzi wechiza lomnye umntu, uya kuba ungafanelekanga ngokwengqiqo yeYunivesithi yaseHodges. Ukuba umxholo wokungena kwakho ubanga ukuba kukwaphula neliphi na ilungelo lobunini okanye lamalungelo obunini obukrelekrele alo naliphi na iqela lesithathu, Uya kuthi, ngendleko zakho kuphela, ukhusele okanye uhlawulele kuloo mabango. Uya kuhlawulisa, ukhusele kwaye ubambe iYunivesithi yaseHodges engenabungozi kuyo nayiphi na inkundla, ukuqhubeka, amabango, uxanduva, ukulahleka, umonakalo, iindleko okanye inkcitho, enokuthi iYunivesithi yaseHodges ifumane, ihlupheke, okanye kufuneke ukuba ihlawule ngenxa yolwaphulo-mthetho okanye erhanelwa ukophulwa kwalo naliphi na ilungelo lesithathu.
Immimiselo & nemiqathangoIYunivesithi yaseHodges inelungelo, ekubambeni kwayo, ukurhoxisa, ukuphelisa, ukuguqula okanye ukumisa ukhuphiswano kufuneka intsholongwane, ibug, ungenelelo lomntu olungagunyaziswanga, ubuqhetseba, okanye esinye isizathu esingaphaya kolawulo lweYunivesithi yaseHodges olonakeleyo okanye oluchaphazela ulawulo, ukhuseleko, ukulunga, okanye indlela efanelekileyo yokuziphatha kukhuphiswano. Kwimeko enjalo, iYunivesithi yaseHodges inokukhetha uMninimzi kuwo onke amangenelo afanelekileyo afunyenwe ngaphambi kunye / okanye emva (ukuba kufanelekile) inyathelo elithathwe yiYunivesithi yaseHodges. IYunivesithi yaseHodges inelungelo, ngokokubona kwayo, ukukhubaza nawuphi na umntu ophazamisa okanye ozama ukuphazamisa inkqubo yokungena okanye ukusebenza kukhuphiswano okanye iwebhusayithi okanye ophula le Migaqo neMiqathango. IYunivesithi yaseHodges inelungelo, ngokubona kwayo, ukugcina ukuthembeka kukhuphiswano, ukuphelisa iivoti ngaso nasiphi na isizathu, kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho: amangeniso amaninzi avela kumsebenzisi ofanayo avela kwiidilesi ezahlukeneyo ze-IP; amangenelo amaninzi avela kwikhompyuter enye ngaphezulu koko kuvunyelwe yimigaqo yokhuphiswano; okanye ukusetyenziswa kwee-bots, ii-macros, izikripthi, okanye ezinye iindlela zobuchwephesha zokungena. Naliphi na ilinge lomntu ongenayo ukonakalisa ngabom nayiphi na iwebhusayithi okanye ukujongela phantsi ukusebenza okusemthethweni kukhuphiswano kunokuba kukwaphula umthetho wolwaphulo-mthetho kunye noluntu. Ukuba loo mzamo wenziwe, iYunivesithi yaseHodges inelungelo lokufuna ukonakaliswa ngokupheleleyo kangangoko kuvunyelwe ngumthetho.
Imida yemfaneloNgokungena, Uyavuma ukukhulula kwaye ubambe iYunivesithi yaseHodges engenabungozi kunye neenkxaso-mali zayo, ezinxulumene nayo, iiarhente zentengiso kunye nokwazisa, amaqabane, abameli, iiarhente, abalandela, ukunikezela, abasebenzi, amagosa, kunye nabalawuli kulo naliphi na ityala, ukugula, ukwenzakala, ukufa, ilahleko, isimangalo, ibango, okanye umonakalo onokuthi uvele, ngqo okanye ngokungathanga ngqo, nokuba ubangelwe kukungakhathali okanye hayi, ukusuka: (i) ekuthatheni inxaxheba kolo khuphiswano kunye / okanye ekwamkelweni kwakhe, ekufumanekeni, ekusebenziseni, okanye ekusetyenzisweni gwenxa kwayo nayiphi na into ibhaso okanye nayiphi na inxalenye yalo; (ii) ukusilela kobuchwephesha nangaluphi na uhlobo, kubandakanya kodwa kungaphelelanga ekusebenzeni kwayo nayiphi na ikhompyuter, intambo, uthungelwano, izixhobo zekhompyutha, okanye isoftware, okanye esinye isixhobo soomatshini; (iii) ukungafumaneki okanye ukufikeleleka kwalo naluphi na uthumelo, umnxeba, okanye inkonzo ye-Intanethi; (iv) ungenelelo lomntu olungagunyaziswanga nakweyiphi na indawo yenkqubo yokungena okanye uKhuthazo; (v) Impazamo ye-elektroniki okanye yomntu kulawulo loKwazisa okanye xa kusenziwa ungeniso.
Iingxabano: Olu khuphiswano LULAWULWA YIMITHETHO YASE-United States KUNYE [nephondo lakho], NGAPHANDLE KWENKONZO YOKUXABANA NEENKONZO ZOMTHETHO. Njengombandela wokuthatha inxaxheba kolu khuphiswano, umthathi-nxaxheba uyavuma ukuba nakuphi na ukungavisisani okungasombululekiyo phakathi kwamaqela, kunye nezizathu zesenzo ezivela okanye ezinxulumene nolu khuphiswano, ziya kusonjululwa ngokukodwa, ngaphandle kokubhenela kulo naluphi na uhlobo lwentshukumo yeklasi , Phambi kwenkundla ebekwe [kwilizwe lakho / kwiphondo] elinolawulo. Ngaphaya koko, nakweyiphi na impikiswano enjalo, naphantsi kwayiphi na imeko umthathi-nxaxheba uya kuvunyelwa ukuba afumane amabhaso, kwaye ngaloo ndlela uwarhoxisa onke amalungelo omonakalo, ukohlwaya, okwenzekileyo, okanye okonzakalisayo, kubandakanya nemirhumo efanelekileyo yegqwetha, ngaphandle kweendleko zomthathi-nxaxheba ( okt iindleko ezinxulumene nokungenela olu khuphiswano). Umthathi-nxaxheba uqhubeka ukuyekisa onke amalungelo okuba nomonakalo ophindaphindiweyo okanye owandisiweyo.
umthetho wabucalaUlwazi olungeniswe ngengeniso luxhomekeke kuMgaqo-nkqubo wabucala ochazwe kwiwebhusayithi yaseYunivesithi yaseHodges. Ukufunda umgaqo-nkqubo wabucala, Cofa apha.
Uluhlu lwabaphumeleleyo: Ukufumana ikopi yegama likaWinner okanye ikopi yale Mithetho yaseburhulumenteni, thumela isicelo sakho kunye nemvulophu enesitampu, ebhekiswa ngokwakho kwi: Hodges University Department Department, 4501 Colonial Blvd., Fort Myers, Fl 33966, USA. Izicelo mazifunyanwe ungadlulanga umhla we-23 ka-Okthobha u-2020.
Umxhasi: Umxhasi wokhuphiswano liSebe leNtengiso leYunivesithi yaseHodges, 2647 Isangqa sobungcali, eNaples, FL 34119 USA.